Tontolon’ny internet | Pakysse | Page 2
Archive for the ‘Tontolon’ny internet’ Category
Very seza i Andry Rajoelina ka lasa romotra be. Mila mailo i Hery Rajaonarimampianina mivady.
février 24, 2014 in 2014, Ady Hevitra, Andry Rajoelina, Andry Rajoelina mafia, Dahalo, Fahantrana, Fanapareham-pahefana, Fanehoana hevitra, Fangalarana ny volam-panjakana, Fiainam-pirenena, Fikambana, Fisainana mampahonena, Fitantanana mampiomehy, Internautes, internet, journalisme citoyen, Journaliste citoyen, Kolikoly avo lenta, Madagasikara, Mafia malagasy, Malagasy, MAPAR, Mpanao politika, nTIC, Olom-pirenena, Politika, Revolution web2.0, Samihafa, T4D-M4D, Toe-tsaina mila miova, Tontolon'ny internet, Vahoaka misy saina ny malagasy, Very seza i Andry Rajoelina ka lasa romotra be, Web 2.0
Sary: nalaina tao amin’ny Google; Andry Rajoelina niaraka tamin’ireo miaramila mpanogam-panjakana
Mihevitra fa mbola ilaina eto amin’ny firenena, ny fomba amam-panao maloto sy ny fisainana jiolahimboto. Raha tsy mitandrina tsara nefa, i Hery Rajaonarimampianina mivady. Raha ny fomba amam-panaon’i Dijaka sy ny manodidina azy no jerena. Afaka fotoana fohy, dia mety ho avy eny Tsimbazaza, Ambohitsirohitra ary Iavoloha ny tafondro sy ny basy ary ireo mpikarama an’ady mitam-piadiana isan-karazany.
Lasa mpampianatra politika ny mpikarakara lanonana
Talanjona sy variana ny rehetra, raha nanome fanazavana amin’ny tokony ho atao, eo amin’ny lafiny ara-politika ingahy Rajoelina. Orakoraka sy tabataba feno fifaliana no nandraisan’ireo mpankafia azy tamin’izany. Raha izay tokoa mantsy no arahina! Tokony ho hajaina sy ekena izany ve ny fangalarana ny harem-pirenena sy ny fanaovana kolikoly, ny famonoana olona, ny lainga tsara lahatra sy ireo ratsy rehetra isan-karazany nanabeazany ny vahoaka malagasy, nandritra ny fitantanany ny fitondrana tetezamita.
Very tadipoitra ka lasa mivoaka sy miditra tahakan’ny lelon-jaza
Sarotra dia sarotra tokoa ny toerana misy an’ingahy mpikiky kapila manjelatra ankehitriny. Sady very ny vola, very ny seza fa indrindra tsy araka ny nampoiziny ny fiodin’ny raharaham-pirenena. Ny loha malemy tsy mikatona sa ny tadipoitra tsy tapaka tsara no mahatonga azy mivoaka sy miditra tahakan’ny lelon-jaza?
Diniho sy lalinanio lalina ihany (inona ny dikanio?)
Diniho sy lalinanio lalina ihany hoy ingahy mpanentana. Ny maha mpikarakara lanonana an’i Rajoelina, sa ny maha mpandroba fitondrana, no mahatonga azy miteniteny foana tahaka izao.
Fehiny, very seza i Andry Rajoelina ka lasa romotra be. Mila mailo i Hery Rajaonarimampianina mivady.